အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: January 2013
မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ချင်လို့တဲ့။ ကိုယ်လူမျိုးတွင် ဂုဏ်ယူ နိုင်လောက်သော အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ ဘာတစ်ခုမျှ မရှိခြင်း ကြောင့် သူတစ်ပါးလူမျိုး ဖြစ်ချင်ဟန်တူပါသည်။ ရှက်ဖို့ကောင်းလေစွ။ သူတစ်ပါးလူမျိုး ဖြစ်ခွင့် ရခြင်းကြောင့် အနေချောင် အစားချောင် အသွားချောင် စသည့် အချောင် လိုက်လိုစိတ်ကြောင့် သာ သူတစ်ပါးလူမျိုး ဖြစ်ခွင့် ကို အမိအရ တောင်းဆိုနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ရှက်တတ်ရင် လဲလိုသာ သေနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးလူမျိုး၏ ဂုဏ်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောက်တည် ထိန်းသိမ်း လာခဲ့ ခြင်းကြောင့်သာ ရှင်သန်နေသည်မဟုတ်ပါလော။ အလွယ်လိုက် အချောင်လမ်းစဉ်ဖြစ် မည်သည် အရာမျှ မရနိုင်ကြောင်း ထပ်ဆင့် သတိပေးလိုက်ပါရစေ။ မြန်မာစာ ကို လူလူသူသူ ရေးတတ် ဖတ်တတ်ရုံမျှ ဖြင့် အင်တာနက် သုံးစွဲတတ်ရုံမျှဖြင့် တစ်ခြားတစ်ပါးသော လူမျိုး၏ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ မိမိတို့ ထံတွင် ရှိနေပြီ ဟု ထင်လျှင်မှားလိမ့်မည်ထင်သည် ။ နိုင်ငံတစ်ကာ အသိုင်းအ၀န်း၏ တရားဝင်ထောက်ပံ ကြေးကို မျှော်ရည်ကာ တရားဝင်ရပ်တည်လိုသော လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို မျှော်မှန်းနေလျှင်လဲ မျိုးဖောက်ခြင်း ဘာသာ သွတ်သွင်းခြင်း မုဒိန်းကျင့် ခြင်း စသော ယုတ်မာသောလုပ်ရပ်များကို ရှောင်ကာ လူသားပီသ အောင် နှစ်ပေါင်းများ စွာ နေထိုင်ပြ ခြင်းဖြင့် တစ်ပါး လူမျိုး၏ ယဉ်းကျေးမူ ကိုလေးစာလိုက်နာပါလေ။ တစ်ပါးလူမျို နေထိုင် စားသောက်မူပုံစံကို မသိပါပဲ ထဲထဲဝင်ဝင် မရှိပါပဲ တစ်ခြားလူမျိုး ဖြစ်ခွင့် ရရန် မဖြစ်နိုင်ပါပေ။
ဆူညံလို့တောင်း ပြည်သူအပေါင်းရဲ့ အားမာန်
ပေါင်းအသင်းစုံ ရောင်းရင်းအကုန် နဲ့
ခရိုနီ ခင်ရွှေ အပါးသို့
Posted by Wai Lin Aung at 4:11 PM
ပြစ်မူမထင်ရှား သရွေ့ အပြစ်မဲ့ တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ ပြစ်မူထင်ရှားပြီး ပြစ်ဒဏ် မခံ ရသေးတာတွေကို လည်း တာဝန်ယူ ဖမ်းဆီးပေးနိုင်တဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းကို ထူထောင်ရပါမယ်။ သို့မှသာ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်လာမှာ မလွဲမသွေပါပဲ ။ ယခင်စစ်အစိုး ရနဲ့ ခရိုနီများဟာ နင် ကအကောင် ကြီးလို့ နှစ်ခါ ပြန်လျောက်ခိုင်း ပြီး ပြုတ်ကျမှ သတ်စားတဲ့ အကျင့် ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြသူတွေပါ။ ပြောရရင် မတရားပေမဲ့ တရားဝင်အောင် လုပ်တတ်ကြပါပေတယ်။ တရားဥပဒေ နဲ့ အမှန်တရားပေါ်ကို နင်းလျောက်တတ်သူများ ဆို တာ ကို ဒေါ်အောင်စုကြည်အနေနဲ့သတိပြု ရပါလိမ့်မယ်။ ခရိုနီများကို အသုံးချ ဖို့ လိုတယ် ဆိုတာလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသုံးချ ခံ ပြန်မဖြစ် အောင် လည်း ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားရပါမယ်။ လာဘ်ပေးတာ လက်မခံ ပေမဲ့လက်ဆောင်ပေးတာကို လက်ခံတတ်တဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်း အဖြစ် စနစ်တကျ ရှောင်တိမ်းတတ်တဲ့ ခောတ်ဟောင်း အုပ်ချူပ်မူ ပုံစံကို ဆက်လက် လက်ခံမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအတွက် ထူးမခြားနား ပါပဲ လို့ ပြောရစေ။ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစာ က ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးအမျိုးမျိုးကြောင့် အုပ်ချူပ်သူအကြိုက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်သယောင် ထိုးကျွေး ဥပမာ စာသင်ကျောင်း ဆောက်ပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုသည် ။ အုပ်ချူပ်သူကိုလည်း လက်ဆောင်ပေး ။ နောက် ဒေသခံ ပြည်သူများဆီ က ရနိုင်လောက်တဲ့ အခွင့်အရေးမှန်သမျှ အကုန်ယူ ။ အာဏာရှိ လူ တန်းစား ကို သူတို့ လက်ထဲ မှာ ၊
သူ တို့ ခါးပိုက် ထဲ မှာ ရှိနေသယောင် အယောင်ဆောင် ။ ဘာမှ မသိနားမလည်းတဲ့ပြည်သူ ကို ခြိမ်းခြောက် အနိုင် ကျင့်တာတွေ များလှပါပြီ ။ဘယ်သူ့ ကိုမှ တိုင်လို့မရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ဘ၀ က ကယ်သူ ကူသူမရှိ။ အို ဒီမို အမေရယ် ပြစ်မူမထင်ရှားပေမဲ့ ခံစားနားလည် နိုင်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ပြစ်မူထင်ရှားသူများ ကို အပြစ်ပေးပါ။ ပြစ်မူမထင်ရှားရင်လည်း ဖော်ထုတ်ပါ။ ဆင် ကောင်ကြီးတွေ့နေပြီးမှ ဆင်ခြေရာ မတွေ့ လို့ ပြစ်မူမထင်ရှားရင် လည်း ဆင်ကြီး တစ်လှမ်းထပ်လျှောက်တိုင်းဆင်ခြေရာ တွေ့မှာပါ အသေအချာပါ ။ အဲသည့် ဆင်ခြေရာကို အသေအချာစောင့်ကြည့်ပေးပြီး တွေခဲ့ ရင်လည်း နှာစည်း မနေပါနဲ့ လို့သာ ဆိုပါရစေတော့။
Posted by Wai Lin Aung at 6:24 PM
I feel ashamed myself because of his article, I got the certificate of tour guide at 1995. But I can't success to becomeatour guide.Some of the difficulties in this article are real. It make us to destroy my ambition. I am very sorry myself. but I feel glad for him.
Posted by Wai Lin Aung at 4:44 PM